राम्रो कपालको रहस्य र एक स्वस्थ स्क्याल्प प्राकृतिक कपाल रेग्रोथ र कपाल झर्ने उपचार
तपाईंको किनमेल कार्ट खाली छ।
क्लिनिक प्रमाणित! DHT अवरोधक | हर्बोलोजी
2 महिना उपचार
6 महिना उपचार
1 वर्ष उपचार
क्यूई के हो?
5a- रिडक्टेज अवरोधक
पछि र पछि
अक्टोबर 09, 2019
सूर्य एक्सपोजरले टक्कुटपना निम्त्याउन सक्छ
अक्टोबर 09, 2019 माइकल ख्यारी
तपाईंको कपाल किन स्वस्थ रहनको लागि यी अभ्यासहरू आवश्यक छ प्रायः व्यक्तिहरू आफ्नो शरीरमा छालालाई माया गर्छन् र लाम्ड गर्दछन् र उनीहरूको कपालको लागि पनि त्यसो गर्न बिर्सन्छन्। स्वस्थ स्क्याल्प र कपालले तपाईंको व्यक्तित्वको बारेमा खण्डहरू बोल्दछ। यो राम्रो संवारनको अंश हो र तपाईंको सामान्य शारीरिक उपस्थितिमा थप गर्दछ। केहि मानिसहरु लाई चाहिन्छ
सेप्टेम्बर 17, 2019
तनाव: कपाल पातलो हुनुको कारण
सेप्टेम्बर 17, 2019 माइकल ख्यारी
अगस्ट 19, 2019
कपाल झर्ने उपचारको खतराहरु
अगस्ट 19, 2019 माइकल ख्यारी
5 संकेतहरू तपाईं बाल्डा हुँदै हुनुहुन्छ
जुलाई 18, 2019 माइकल ख्यारी
15 सक्छ, 2019
योगले बताउँछ कि बाल विकास बढाउँछ
15 सक्छ, 2019 माइकल ख्यारी
13 सक्छ, 2019
स्टाइलिंग तरिका हानिकारक तरिका
13 सक्छ, 2019 माइकल ख्यारी
अप्रिल 05, 2019
5a-reductase ब्लक DHT र Reverses कपाल हानि
अप्रिल 05, 2019 माइकल ख्यारी
खराब आहारले खराब कपालको विकास गर्छ
मार्च 30, 2019 माइकल ख्यारी
कपाल हानिकारक उपचारको लागि औषधि प्रयोग नगर्नुहोस्
मार्च 28, 2019 माइकल ख्यारी
फेब्रुअरी 25, 2019
कपाल रेग्रो वृद्धि गर्न स्केप मालिश
फेब्रुअरी 25, 2019 माइकल ख्यारी
तपाईंको हेयर दैनिक धो नगर्नुहोस्
जनवरी 21, 2019 माइकल ख्यारी
पानीमा रसायनहरू कपालको विकासमा असर पार्छन्
डिसेम्बर 11, 2018 माइकल ख्यारी
नोभेम्बर 13, 2018
माथि 10 युक्तिहरु बाल पतन रोक्न सुझाव
नोभेम्बर 13, 2018 माइकल ख्यारी
अक्टोबर 17, 2018
तौलिए समान तुल्याइएका छैनन्
अक्टोबर 17, 2018 माइकल ख्यारी
अगस्ट 13, 2018
महिला कपाल हानि मिथक र तथ्य
अगस्ट 13, 2018 माइकल ख्यारी
जुन 02, 2018
तपाईं कसरी आफ्नो कपाल धोकाउनु पर्छ
जुन 02, 2018 माइकल ख्यारी
31 सक्छ, 2018
राम्रो कपाल र एक स्वस्थ खोपडीको रहस्य
31 सक्छ, 2018 माइकल ख्यारी
अप्रिल 11, 2018
तपाईंको कपाल फेरि पुन: बढाउने सबैभन्दा अधिक प्राकृतिक तरिका
अप्रिल 11, 2018 माइकल ख्यारी
31 सक्छ, 2018 by माइकल खुरी
तपाईंको कपाल किन स्वस्थ रहन यी अभ्यासहरू आवश्यक छ
अधिकांश व्यक्तिहरू आफ्नो शरीरमा छालालाई माया र लाड लाग्छ र आफ्ना कपालको लागि पनि त्यसो गर्न बिर्सन्छन्। स्वस्थ स्क्याल्प र कपालले तपाईंको व्यक्तित्वको बारेमा खण्डहरू बोल्दछ। यो राम्रो संवारनको अंश हो र तपाईंको सामान्य शारीरिक उपस्थितिमा थप गर्दछ। जबकि केही व्यक्तिले छोटो कपाल काट्ने पक्ष लिन्छन् जसलाई धेरै रखरखावको आवश्यकता पर्दैन, जो लामो कोठामा खस्छन् जसले कोठामा खस्दछ, फुलर कपालले नियमित रूपमा बलिदान गर्नु पर्छ ताकि उनीहरूको कपाल र टाउकोको छाला निरोग रहन सुनिश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको स्क्याल्प र कपाल को खातिर, हामी एक कार्य गर्नको लागि कम्पाइल गरेका छौं जुन हुनेछ तपाईंलाई स्वस्थ स्क्याल्प र कपाल प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। दिन प्रति दिन कपालको देखभाल तालिकामा यी अभ्यासहरूको नियमित समावेशले चमत्कारहरू काम गर्दछ। तिनीहरूलाई प्रयास गर्नुहोस् र स्वस्थ स्क्याल्प / कपाल भएको असीम फाइदाहरूको आनन्द लिनुहोस्।
बुझ्नुहोस् कि कपाल जीवित कोशिकाबाट बनेको छ
न nailsहरू जस्तै, कपालको खुला भागलाई सक्रिय कपाल कोशिकाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ जबकि यसको जराहरू धेरै सक्रिय र जीवित छन्। जीवित कोषहरू जसले कपालको फोलिकल्सहरू बनाउँदछन् प्रोटीनहरू हुन् जुन शरीरबाट नियमित एमिनो एसिड पोषणमा निर्भर गर्दछ जीवित रहनको लागि। उचित तरिकाको प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको स्क्याल्प र अदृष्य कपाल कोषहरूको ख्याल राख्नुहोस् यदि तपाईं लामो, फुलर र स्वस्थ कपालको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने।
एक स्वस्थ शरीर = स्वस्थ कपाल
के हामी खान्छौं यसले शरीरको प्रदर्शनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्राकृतिक खानाहरू उत्तम हुन्छन् जब यो स्वस्थ शरीर कायम राख्नको लागि आउँदछ। सिंथेसाइज्ड वा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थहरूले हाम्रो शरीरको कोशिकालाई हानिकारक पार्ने पर्यावरणीयहरू, खाद्य स्वादहरू र रंगहरू जस्ता रासायनिक अवयवहरूमा थप गर्दछ। स्वस्थ कपालका लागि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सन्तुलित आहार खान्नुहुन्छ, नियमित व्यायाम गर्नुहोस् र तपाईंको शरीरलाई हानिकारक विषाक्त पदार्थहरूमा पर्नबाट जोगिनुहोस्।
अधिक प्रोटीन बढी कपाल
स्वस्थ कपालको लागि तपाइँको खानामा प्रोटीनको स्वस्थ खुराक खान्नुहोस्। दूध, मासु (रातो र सेतो), दूध उत्पादनहरू, सोया र नट्स केहि सजिलैसँग उपलब्ध प्रोटीन खाना हुन्। प्राकृतिक प्रोटीन सप्लीमेन्टहरूले मेलानिन र अन्य अमीनो एसिडको उत्पादनलाई बढावा दिन्छन् जुन स्वस्थ कपालको विकास र मर्मतका लागि आवश्यक छ।
जहिले पनि तनावमुक्त जीवन जीउन कोसिस गर्नुहोस्
तपाईंको जीवनमा तनावले क्यूआईको असंतुलन निम्त्याउँदछ र एक पटक यो असंतुलित बिरामीहरू हुन्छ र कपाल झर्ने जस्ता सर्तहरू आउँछन्। प्रत्येक मूल्यमा तनावबाट बच्नुहोस् र अपरिहार्य परिस्थितिको कारणले यो तपाईंको जीवनमा आउनुपर्दछ र यसलाई सकारात्मक तरीकाहरू प्रयोग गरेर प्रबन्ध गर्नुहोस्।
उच्च रासायनिक सामग्रीको साथ उत्पादनहरू प्रयोग नगर्नुहोस्
कपाल पोमडेस, टॉनिकहरू र रिलरहरू तपाईंको लागि राम्रा उत्पादनहरू हुन्, तिनीहरू पानी र रंग पुन: प्राप्तिमा मद्दत गर्छन् र स्टाइलको बखत यसको बनावट प्रबन्ध योग्य बनाउँदछन्। जबकि यो तपाइँको कपाल मा यी उत्पादनहरु को उपयोग लाई बेवास्ता गर्न लगभग असम्भव छ, हामी सल्लाह दिन्छौं कि तपाईले उनीहरूको प्राकृतिक रूप मा प्रयोग गर्न कोशिस गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई उत्पादकहरूबाट किन्नुहोस् जसले तिनीहरूलाई प्राकृतिक सामग्रीहरूबाट बाहिर निकाल्छन्। यी उत्पादनहरूमा कम रासायनिक घटक तपाईंको कपाल र टाउकोको स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। Minoxidil वा Finasteride जस्ता औषधि समावेश गरी कपाल झर्ने उपचार प्रयोग नगर्नुहोस्, बरु प्रयास गर्नुहोस् र प्राकृतिक प्रयोग गर्नुहोस् बाल विकास स्प्रे जस्तै Natural Regain.
तपाईको कपाल र टाउकोको छाला सधैं सफा राख्नुहोस्
A सफा खपत स्वाभाविक रूपमा स्वस्थ कपाल प्राप्त गर्न पछि छ। सफा हुनुले हानिकारक ब्याक्टेरिया र डन्ड्रफ, दादुरी र जुँवा जस्ता सर्तहरूको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ। पसिना र फोहोरको निरन्तर मिश्रणको कारण फोहर कपाल र टाउको भय aw्कर गन्ध आउँछ, यसलाई सफा गरिसकेपछि तपाईंको सौंदर्य मूल्य र आत्मसम्मान बढ्छ र तपाईं साहससाथ जनतामा जान सक्नुहुन्छ।
तपाईंको टाउकोको छाला र कपाल सफा राख्न केहि तरिकाहरू तल हाइलाइट गरिएका छन्:
Dead मृत छाला कोषहरू हटाउनको लागि तपाईंको स्क्याल्प एक्सफोलिएट गर्नुहोस्
जसरी छालालाई प्रतिरोधात्मक मृत कोषहरू हटाउनको लागि नियमित रूपमा एक्सफोलीएटेड हुनु आवश्यक छ जसले पोर्सलाई रोक्न र उनीहरूको उत्पादनलाई असर गर्न सक्छ, कपाल र टाउकोको छाला पनि एक्स्फोलिस्ट हुनु आवश्यक छ। यस थेरापीका लागि तपाईले घर बनाएको एक्फोलीएटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको शैम्पूमा केही चम्मच चिनी थप्नुहोस् र यसलाई कपालमा र छालामा स्क्रब गर्नुहोस् केही मिनेटका लागि। धुनुहोस् र तपाईंको सफा गर्ने तालिकासँग जारी राख्नुहोस्।
• हल्का शैम्पू र कन्डिशनर प्रयोग गर्नुहोस् र कपाल धुनुहोस्
शैम्पू र कन्डिशनरहरु मा नियमित साबुन भन्दा हाम्रो कपाल सफा गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो formularation हुन्छ। कम्तिमा हप्तामा एक पटक तपाईंको कपाललाई श्याम्पु गर्नु वा प्रत्येक दुई हप्तामा एक पटक यसको गन्ध फैलाउने एजेन्टहरूमा तपाइँको जोखिममा निर्भर गर्दै यसलाई कायम राख्ने र टाउकोको प्वालहरू कुनै पनि फोहोरबाट छुटकारा पाएको निश्चित गर्दछ जुन यसलाई सास फेर्न र प्राकृतिक रूपमा कायाकल्प गर्नबाट बाधा पुर्‍याउँछ।
Hair तपाईको स्क्याल्प र कपालमा कडा कपालका स्टाइलहरू त्याग्नुहोस्, धेरै तातो विध्वंसक छ
तपाईको कपाल तपाईको शरीरको सब भन्दा गाह्रो भाग जस्तो देखिन्छ तर तपाई यो जान्न चकित हुनुहुनेछ कि यो पनि त्यति नै संवेदनशील छ। हेल्पस्टाइल जसले टाउकोको छाला र कपालको फोलिकल्समा दबाब दिन्छ, यसको स्वास्थ्यको लागि राम्रो छैन, यी स्टाइलहरूले यसलाई कमजोरबाट बनाउँछ किन कि कपाल विकासको असमय अवधिमा झर्छ। यी शैलीहरूले विभाजित अन्त्य पनि प्रस्तुत गर्दछ जसले यसको निरन्तर विकासलाई निरुत्साहित गर्दछ। यसलाई ट्रिम गर्दा मुद्दालाई सुल्झाउन मद्दत हुनेछ तर यो समस्या कहाँबाट सुरु भयो त्यसबाट जहिले पनि बुद्धिमानी हुन्छ। मध्यम अनुपातमा तातो छालाको लागि राम्रो हो किनकि यसले आफ्नो मांसपेशीहरूलाई शान्त र आराम दिन्छ। यसको धेरै नै विनाशकारी हुनसक्दछ किनभने कि कपाल प्रोटीन यौगिकहरूबाट बनेको अ is्ग हो। जब यी यौगिकहरू ज्यादै धेरै तातोको संपर्कमा आउँछन्, तिनीहरू जलाउन र विघटित हुन्छन्। तपाइँको कपाल तातो हुने ठाउँमा पोखाउने हुँदा यसको शक्ति र स्वभावलाई असर गर्दछ।
Water धेरै पानी र प्राकृतिक फलको रस पिउनुहोस्
पानी शरीरमा अत्यावश्यक तत्व हो। वयस्क पुरुष निकायहरूमा, पानीले 60% बनाउँछ जबकि महिलाहरूमा यो 55% हुन्छ। यो हल्का फरक प्रत्येक लि in्गमा मेटाबोलिजमको दरको कारण हो। पुरुषहरू महिला भन्दा बढी सक्रिय छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। पानी, टिश्यू र रगत कफ को ढुवानी गर्न को लागी सुविधा पुर्‍याउँछ जुन यसको पोषक समृद्ध गुणहरूको लागि परिचित छ। यो विभिन्न सेलुलर, टिश्यू र अंग कार्यहरू जस्तै मेटाबोलिज्म र फोक्सो र शरीरको अन्य क्षेत्रहरूबाट CO2 को यातायातको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। छालामा, पानी पसिनाको रूपमा शरीरलाई चिसो गर्न प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो शरीरमा यति ठूलो% बनाउनु, यो कुनै झूट होइन कि पानीले कपाल जस्ता अंगहरूको प्रदर्शनमा असर गर्छ। धेरै पानी पिउँदा तपाईंको शरीरलाई तरलताको क्षमताले शरीरमा रगत र कफ जस्ता पौष्टिक सम्पन्न गुणहरू पुर्‍याउन आवश्यक हुन्छ।
अर्कोतर्फ, प्राकृतिक फलफूलको रसले घटकहरू ल्याउँदछ जुन सामान्यतया स्टार्च र प्रोटीनहरूको दैनिक सन्तुलित आहार सेवनमा फेला पर्दैन। यी रसहरू पानीमा घुलनशील र कहिलेकाँही फ्याट विद्रव्य भिटामिनहरू जस्तै विटामिन ए, सी, के र भिटामिन ई मा समृद्ध छन्। यी भिटामिनहरूले यसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, मर्मत र यसको सेलुलर, टिशू र जैविक कार्यहरू मर्मत गर्न र मद्दत गर्न शरीरमा रोग लड्ने कम्पाउन्डहरू परिचय गर्दछ।
Your तपाईको कपाल झर्नेको लागि प्राकृतिक उपचार प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईको क्षतिग्रस्त कपालको लागि कृत्रिमको भन्दा एक प्राकृतिक सुधार मद्दतको लागि प्रयोग गर्नु सधैं बुद्धिमानी हुन्छ। कपाल उपचार र मास्क एक यूवी सूर्य को प्रकाश, धेरै धेरै चिसो र धूलो को रूप मा एजेन्टहरु बाट तपाइँको कपाल रक्षा को एक तरीका हो। जबसम्म हामीले कपालको उपचार र मास्कको प्रयोगलाई अनुमोदन गरेका छौं हामी यी चीजहरूको प्राकृतिक रूपमा प्रयोग गर्नका लागि पनि कडा सल्लाह दिन्छौं। तपाईं सँधै राम्रो DIY कपालको मुखौटा बनाउन सक्नुहुन्छ जुन घरमा सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छ जस्तै अण्डाहरू, एवोकैडो र महमा।
Manage तपाईंको कपालको बनावट, र ,्ग, मात्रा र एउटा व्यवस्थित कपाल चिकित्सा तालिकाको लागि गहिराइ बुझ्नुहोस्
कपाल डिजाइन को तत्वहरु अध्ययन गर्दा, दिमागमा राख्न को लागी धेरै पक्षहरु छन्। कपाल तपाईको शरीरमा सामान्य सम्पत्ति जस्तो देखिन्छ तर प्रत्येक व्यक्तिको कपाल धेरै तरीकाले अद्वितीय हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा तपाईं स्तब्ध हुनुहुनेछ। एउटा अनौंठो तरीका र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको DNA संरचना हो जुन एक व्यक्तिको कपाल बनावट, खण्ड, रंग र गहराईको लागि जिम्मेदार हुन्छ। कपाल डिजाइनरहरूले यी4पक्षहरूलाई ट्रेन्डी हेयरस्टाईल र हेयरकटहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्दछन्। यी पक्षहरू तपाईंको नियमित कपाल मर्मत नियमितमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। स्टाइलिंग उत्पादनहरू र प्रविधिहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंको कपालको बनावटमा उदार हुन्छ र यसको रंग, आवाज र गहिराईलाई कुनै पनि हिसाबले हानी गर्दैन। फेरि, स्वस्थ कपाल यसको मूल रंगमा कम्पन हुन्छ। त्यहाँ धेरै प्राकृतिक कपाल र color शेडहरू छन् त्यसैले यदि तपाईं आफ्नो कपाल मर्ने वा रंग पार्ने भन्दा यसको प्राकृतिक रंगमा राख्नुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईंले कपाल मर्मत गर्ने तरिकाहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ जुन तपाईंको कपाललाई प्राकृतिक चमक प्रदान गर्दछ जबकि यसको प्राकृतिक रंग कायम राख्दै।
सफा खपतबाल विकास स्प्रेस्वस्थ बालस्वस्थ टाउकोकसरी राम्रो कपाल राख्नकसरी आफ्नो कपाल स्वस्थ राख्न
यो पोस्ट साझा
एकका लागि साइन अप गर्नुहोस्
नि: शुल्क परामर्श!
तपाईंले कुनै पनि क्षणमा सदस्यता हटाउन सक्नुहुनेछ। त्यस उद्देश्यका लागि कृपया कानुनी सूचनामा हाम्रो सम्पर्क जानकारी पत्ता लगाउनुहोस्।
Natural Regain, 4900 क्रीकाइड पार्कवे, सुइट # 1901-5720, Lockbourne, OH, 43137, USA
फेसबुकमा हामीलाई फेला पार्नुहोस्
256 बिट सुरक्षा भुक्तानी स्वीकृत:
प्रतिलिपि अधिकार 2019 Natural Regain - सर्वाधिकार सुरक्षित
गोपनीयताअवधि र सर्तहरू